Realme zvakare inonunura bhajeti foni iyo inoderedza avo vanokwikwidza, asi kune mashoma ekutengeserana-offs.
Realme ine simba rese muchikamu chebhajeti reIndia izvozvi. Iyo mhando ndiyo yechina-hombe ruoko rwekugadzira nhare munyika uye ine chikamu chemusika che16%. Iyo yakwanisa kunatsa izvi nekuisa chinetso chinoshanda kune Xiaomi mune ino chikamu.
SaXiaomi, Realme inotangisa mafoni mazhinji mukati megore, uye pane chakati checrossover pakati pemitsara yechigadzirwa. Iyo Realme X7 yakatanga kuChina gore rapfuura uye yave kuita nzira yayo kumisika yepasirese. Foni yacho pachayo inogovera zvikamu zvakawanda neiyo Realme 7 Pro, iyo yakaunzwa mwedzi mishanu yapfuura.
Asi chii chinoita kuti Realme X7 ipatsanuke ndiyo MediaTek Dimension 800U - Ini ndaishandisa chipset pane iyo Redmi Ona 9T masvondo mashoma apfuura uye akauya achifadzwa nemitambo irikupa. Iyo Realme X7 yakamisikidzwa ichipesana neiyo Xiaomi mi10i muIndia, nefoni dzese dzinopa kukosha kwakafanana. Saka ngatione zvauri kuwana neiyo Realme X7 uye kana iri foni chaiyo yezvaunoda.
Realme X7 ongororo:
Dhizaini uye skrini
Unofanira kutenga here?
Chinonyanya kukosha: Iyo Realme X7 inobaya mabhokisi ese akakodzera: iwe unowana 90Hz AMOLED pani, makamera anotora mafoto makuru, zvemukati Hardware izvo zvinofanirwa kugara makore akati wandei, uye hwakavimbika hupenyu hwebhatiri ne50W yekuchaja nekukurumidza. Iri kushaikwa mashoma emachiteshi uye inomhanya Android 10, asi kana iwe ukakwanisa kutarisa kupfuura izvozvo, pane zvakawanda zvekuda pano.
Vibrant 90Hz AMOLED mapaneru
Dimension 800U ine yakanakisa kuita
Yakakura kwazvo kukosha
Yese-zuva bhatiri ine 50W inokurumidza kuchaja
Inomhanya Android 10 kunze kwebhokisi
Kwete 3.5mm jack
Hapana microSD kadhi slots
, 19,999 paFlipkart
Realme x7 Mutengo uye kuwanikwa
Iyo Realme X7 ikozvino yave kutengeswa kuIndia uye inowanikwa mumhando mbiri: 6GB / 128GB vhezheni iyo inotengesa pa ₹ 19,999 ($ ​​275) uye 8GB / 128GB modhi inodhura ₹ 21,999 ($ ​​300).
Kune zvakare Realme 7 5G inowanikwa muUK iyo ine imwecheteyo MediaTek Dimension 800U chipset asi inoratidzira LCD pani pachinzvimbo uye inopotsa pane 50W kuchaja.
Realme x7 Dhizaini uye skrini
Realme haina kutsauka zvakanyanya kubva pane zvakajairwa neX7; runhare runotevera rakafanana dhizaini yekushongedza sekuvhura kwazvino kubva kuchiratidzo muchikamu ichi, neshure uye furemu yakagadzirwa nepolycarbonate uye foni inowanikwa mune anonakidza mavara akasiyana.
Iyo Realme X7 ine dhizaini dhizaini - ingo usatore iyo Nebula vhezheni.
Iwo matatu makamera kumashure akarongedzwa akatwasuka, uye iyo imba yacho pachayo haina kubuda zvakanyanya kubva kuchasisi. Foni ine makakombama asinganetsi kuseri uko muviri unosangana nepakati-furemu, zvichiita kuti zvive nyore kubata foni. Nemipimo ye160.9 x 74.4mm, iyo Realme X7 ndiyo imwe yesarudzo dzakaomesesa mune ino chikamu. Izvo zvichiri zvisiri nyore kushandisa foni ruoko-ruoko, asi hazvisi zvisinganzwisisike futi.
Foni inowanikwa mune maviri mavara sarudzo: Space Sirivheri uye Nebula. Iyo yekutanga ine yeindasitiri yekushongedza inoita kuti iratidzike kunge yakasarudzika, nepo yekupedzisira iine muraraungu murara uye yakagadzirirwa kumira kunze. Musiyano weNebula une iwo mutsara weti waReme wa "Shinga Kusvetuka" wakashongedzwa nzira yese yekumashure, uye inopedzisira yataridzika kunge yakashongedzwa.
Ndiri fan of gradient dhizaini, asi iwo mavara kumashure anodzora kubva dhizaini zvishoma uye zvinobudirira anokushandura iwe kuva anofamba bhodhi reRealme. Saka kana iwe uchifarira kutora iyi foni, tora iyo sirivheri sarudzo.
Foni ine bhatani remagetsi kurudyi uye vhoriyamu rocker kuruboshwe, uye iyo SIM kadhi tireyi iri pazasi kuruboshwe kuruboshwe kweiyo USB-C chiteshi. Iko kune-mu-screen yeminwe yekunzwa, uye inokurumidza kuratidza uye kuvimbika mukushandisa kwezuva nezuva.
Iyo yakazara dhizaini yekushongedza yakafanana neiyo Renault 5 Pro, uye nepo X7 isiri yakatsetseka pa8.1mm (maringe ne7.6mm), zviri nyore kubata uye kushandisa. Pa176g, haina kunyanya kurema futi.
Iwe uchawana 6.5-inch AMOLED pani pamberi peiyo Realme X7, uye iyo skrini iyo 90Hz yekuvandudza mwero inoita kuti ive inofadza kushandisa. Iyo pani ine resolution ye2400 x 1080, inowana yakajeka yakajeka mukushandisa kwekunze, uye ine yakanakisa mavara.
Ipo paine pasina sarudzo yekugadzirisa iyo balance bhalansi, unogona kugadzirisa tembiricha tembiricha kune zvaunofarira. Iyo foni ine inogara-ichiratidzwa, asi haina kuita senge-yakapfuma seizvo iwe zvaunowana pane Ruvara OS - iwe unongowana iyo sarudzo yekuratidza iyo wachi pamwe chete nezviratidzo zvekuzivisa uye chiratidzo chebhatiri.
Asi ipaneru rinoita kuti X7 ibude. Iyo 90Hz yekuvandudza mwero inoita kushandisa kwezuva nezuva kungoita zvishoma zvinonakidza kushandisa foni, uye iyo AMOLED skrini ndeimwe yeakanakisa iwe aunowana mune yepakati-renji chikamu.
Iyo Realme X7 inowana inowedzeredzwa yehadhi muchimiro cheMediaTek Dimension 800U chipset. MediaTek iri kuwana zvishoma nezvishoma nzvimbo yepakati-renji neDimension nhevedzano, uye iyo 800U ndiyo imwe nzira inoshanda kune izvo Qualcomm inofanirwa kupa mune ino chikamu.
kuratidza 6.4-inch 60Hz AMOLED
chipset 2.40GHz Kuwanda 800U
Kumusoro Kamera 1 64MP ƒ / 1.8 (yepakutanga)
Kumusoro Kamera 2 8MP ƒ / 2.3 (yakafara-kona)
Front Camera 16MP ƒ / 2.
Kubatana Wi-Fi ac, BT 5.1
bhatiri 4310mAh, 50W yekuchaja
mavara Space Sirivha, Nebula
miganhu 160.9 X 74.4 X 8.1mm
Iyo Dimension 800U ine maviri eCortex A76 macores anokwira kusvika ku2.40GHz uye matanhatu eCortex A55 macores anorova 2.0GHz. Iko hakuna nyaya mukushandisa kwezuva nezuva chero, uye ini handina kuona chero lag kana uchitamba mitambo kana kubhurawuza pachigadzirwa. Iyo chipset inoenderana neiyo Snapdragon 765G uye inofanirwa kuzvibata yega kwemakore mashoma.
Ini handina kukwanisa kuyedza kubatika kwe5G nekuti hapana 5G yekutaura nezvayo muIndia panguva ino, asi kana iwe uri kutsvaga kuwana iyo Realme 7 5G kuUK, ziva kuti iyo Dimension 800U ine 5G mbiri SIM mbiri kumira. DSDS). MediaTek, iri kutaura zvazviri, mutengesi wekutanga chip kupa ichi chikamu, neQualcomm yepasi rose SIM-5G ichiri kuvimba ne5G + 4G.
Imhaka yekuti 5G mbiri SIM mbiri yekumira inoda VoNR (Izwi pamusoro peNew Radio), iyo inoshandisa iyo SA dhizaini yekufona pamusoro pe5G. Nekudaro, iyi ndiyo poindi yekushandisa kune vashandisi muIndia, sezvo ruzhinji rwe5G network achiri mashoma makore kure.
Kana zviri zvimwe zvemuchadenga, iyo Realme X7 inouya ne128GB yekuchengetedza seyakajairwa uye inowanikwa ne6GB kana 8GB ye RAM muIndia. Iko kufambisa kukuru naRealme, asi chinokanganisa apa ndechekuti foni inopotsa pane microSD slot. Iko hakuna 3.5mm jack futi, saka kana iwe ukavimba ne microSD slot yekuwedzera yekuchengetedza uye uchida wired odhiyo, iyo Mi 10i inogona kungangove iri nani imwe nzira.
Iwe unowana yakakura yemukati Hardware, asi hapana microSD slot, NFC, kana 3.5mm jack pano.
Ini ndinonzwisisa kudiwa kwekubva kune microSD slots uye iyo 3.5mm jack, asi Realme yaifanira kunge yakapa 256GB musiyano zvakare, uchifunga kuti hapana nzira yekuwedzera kuchengetedza. Kusiyiwa kwakanyanya pane iyo Realme X7 iNFC; nechinhu chiri kuwedzera kukurumidza muIndia neGoogle ichiwedzera kugona kubhadhara pamusoro peNFC muzvitoro zvekutengesa mukati meGoogle Pay muIndia, hapana chikonzero cheRealme kuti isachiise pafoni yepakati-renji. Kutaura chokwadi, iyo Realme X7 haisiriyo yega foni muchikamu ichi chinorasikirwa neNFC - iyo Mi 10i haina kana.
Kana zviri zvehupenyu hwebhatiri, iyo Realme X7 inouya nebhatiri 4310mAh iyo inonunura kushandiswa kwezuva rese-pasina nyaya. Ini handina kucherechedza chero matambudziko nehupenyu hwebhatiri muvhiki randaishandisa nhare, uye kana iwe uchifanira kuchaja chishandiso, pane 50W inokurumidza kuchaja. Realme inounganidza 65W charger mubhokisi, uye izvo zvakanaka kuti uone.
Chaja yakasungwa inotora maminetsi gumi nemasere chete kubhadharisa foni kubva zero kusvika 18%, uye kubhadharisa kuzere kusvika 50% kunotora maminetsi makumi mashanu chete. Iyo yekukurumidza yekuchaja tech inoreva kuti haufanire kusiya foni yakavharirwa mukati husiku. Realme UI inoshandisa yakafanana memory optimization seColorOS, uye inoita basa rakanaka rinowedzera hupenyu hwebhatiri kana foni iri kuita idling. Ah, uye iwe unowana maviri emagetsi-ekuchengetedza mamodhi ayo anonyanya kuwedzera hupenyu hwebhatiri.
Iyo Realme X7 ine matatu makamera kumashure: 64MP primary lens, 8MP wide-angle module, uye 2MP macro lens. Pamberi kumberi, iwe unowana iyo 16MP lens inotora yakadzikama selfies. Iyo kamera kamera pachayo haina kuchinja kubva kumberi mafoni eReme, nemhando dzese dzekupfura uye toggles senge HDR, timer, uye AI-zvinobatsira maficha anowanikwa nyore.
Iyo 64MP sensor ndeye inozivikanwa huwandu pakati pepakati chikamu chikamu, uye iwe unowana kugona kutora yakazara-res mifananidzo. Kune zvakare yakasarudzika husiku modhi iyo inoita kuti iwe utore zvirinani mapikicha husiku, pro pro mode iyo inokutendera iwe pachako kugadzirisa iyo chena chiyero, kuratidzwa, ISO, uye mamwe marongero Iyo yekuona yekuona inoita kuti iwe ushandure zviri nyore pakati pekutanga uye yakafara-malenzi lenzi, uye iwe zvakare unowana 2x uye 5x digital zoom.
Realme yakaisa mune yakawanda basa kutenderedza kugadzirisa kwayo kamera, uye iyo X7 inotora mifananidzo yakanaka chero paine mwenje wakaringana. Masikati ekupfura ane zvakawanda zvakadzama uye zvine simba mavara, uye kune yakanaka ine simba renji futi. Pfuti husiku zvinowanzopotsa pane zvakadzama uye zvakanyanyisa, asi inyaya iri kutambudza makamera mazhinji mune ino chikamu. Kune izvo zvakakosha, iyo yemhando yehusiku inoita kuti iwe uburitse zvimwe zvakadzama uye nekuyera ruzha mazinga mune akadzika-mashoma mamiriro
Iyo Realme X7 inomhanya Realme UI 1.0 yakavakirwa pa Android 10 kunze kwebhokisi. Iko hakuna kutaurwa kwekuti foni ichagadziriswa riini kuApple 11, asi zvakachengeteka kufunga kuti haigamuchire yakagadzikana kuburitswa kwemwedzi mishoma.
Iyo X7 inomhanya Android 10 kunze kwebhokisi, uye haina kushomeka kwebloatware.
Realme UI 1.0 yakatorwa kubva RuvaraOS, iine Realme ichiwedzera kutora kwayo paganda. Iyo interface yacho pachayo inonzwa yazvino uye haina kunyanya kugadzirisa, asi izvo zvinopedzisira zvichitadzisa ruzivo rwevashandisi huwandu hwebloatware iri kupihwa.
SaXiaomi, Realme inoisa mafoni ayo netoni yezvakagara zvaiswa maapplication ausingazoshandisa, asi anogona kubviswa. Mamwe emasevhisi aya anozadza iwe nezviziviso, saka kubheja kwakanaka ndiko kubvisa zvese bloatware uchangomisa foni. Iyo yekuvharira Screen Magazine ficha ndeimwe iyo iwe yauchazoda kuremadza kana iwe usiri kuda kuona kushambadza pese paunovhura foni yako.
Iyo software yakagadziridzwa mushe yeiyo Hardware, uye ichidzivirira iyo bloatware, iyo yega nyaya yandinayo neX7 ndeyekuti iri kumhanyisa yechinyakare vhezheni yeApple. Realme UI 2.0 inoratidzira yakadzvanywa interface ine yakawanda yakawanda tsika, uye Realme yaifanirwa kunge yakapa yazvino vhezheni yeganda rayo kunze kwebhokisi pane X7.
Realme x7 Mukukwikwidza
Iko kushomeka kwesarudzo pakati-chikamu chikamu, uye iwe unowana akawanda mafoni anounza kukosha kukuru muchikamu ichi. Xiaomi's Mi 10i anobva angouya mupfungwa; iyo foni ine gradient dhizaini iwe yauchazonyatsoda kushandisa, uye inorongedza zvakaomarara Hardware muchimiro cheSpapdragon 750G, 108MP kamera kumashure, uye 4820mAh bhatiri ine 33W inokurumidza kuchaja. Iyo Mi 10i ine LCD pani iyo inokwira kusvika ku120Hz, uye iyo 108MP kamera inenge yakaenzana pamwe neizvo Realme iri kupa neiyo X7. Foni inodhura zvishoma pa- ₹ 21,999 ($ ​​300).
Ipapo pane OnePlus Maodzanyemba. Foni inoramba ichitonga kutengesa muIndia uye ndeimwe yeiyo mafoni akachipa eApple unogona kutenga nhasi. Kunyangwe ichidhura kupfuura iyo Realme X7 pa ₹ 24,999 ($ ​​340) yeiyo 6GB / 64GB vhezheni, iwe unowana zvirinani software uye yekumira Hardware iyo inosanganisira 90Hz AMOLED skrini, Snapdragon 765G chipset, uye maviri kamera kumberi.
Realme x7 Unofanira kutenga here?
Iwe unoda 90Hz AMOLED pani
Iyo 90Hz AMOLED inoratidzira pane iyo Realme X7 inosiyanisa, uye inoita kushandisa chishandiso icho icho zvishoma zvishoma zvinonakidza.
Uri kutsvaga Hardware yakasimba
Iyo Dimension 800U ndeimwe yemachipsets akanakisa iwe aunowana mune ino yakasarudzika chikamu, uye haufanire kunetsekana nenyaya dzekuita pane iyo X7. Foni zvakare ine 6GB yeLPDDR4X RAM seyakajairwa uye 128GB UFS 2.1 yekuchengetedza module.
Unoda kukosha kwakanyanya
Iyo Realme X7 inodhura ₹ 19,999 ($ ​​270) yeiyo 6GB / 128GB musiyano, ichiita sarudzo yekumira muchikamu ichi. Iyo inodimbura ingangoita yega yega yepakati-renhare foni, saka kana iwe uchida kuwedzera kukosha, iyi ndiyo yaunowana.
Iwe unoda yazvino vhezheni yeApple uye yakachena UI
Iyo Realme X7 inouya neiyo Android 10 kunze kwebhokisi, uye hapana kutaurwa nezvekuti foni ichaita switch kuti iende kuApple 11.
Iwe unoda 3.5mm jack kana microSD slot
Ipo iyo Realme 7 Pro yairatidza microSD slot uye 3.5mm jack, izvo zvinoshayikwa kubva kuRealme X7. Kunyangwe iyo base modhi inouya ne128GB yekuchengetera, kana iwe uchida microSD slot yekuwana yako yemunharaunda midhiya raibhurari, uchafanirwa kutarisa kumwe kunhu.
Pakazara, iyo Realme X7 ndeimwe yesarudzo dzakanakisa dzaunowana muchikamu che ₹ 20,000. Realme iri kunyatso kutevera Xiaomi's Mi 10i neichi chishandiso, uye chokwadi chekuti chiri kudzora mukwikwidzi wayo weChinese chinoita kuti X7 inyanye kukwezva. Foni ine inoratidzika AMOLED skrini, yakavimbika Hardware uye kamera, ese-ezuva-bhatiri hupenyu nekumhanyisa kuchaja, uye dhizaini pachayo inotaridzika.
Chokwadi, iyo X7 iri kushaya mashoma maficha, asi kune dzimwe nzira dzinowanikwa kana iwe uchida 3.5mm jack kana microSD slot. Zvino pane chokwadi chekuti software yakakwenenzverwa ne bloatware, ine spammy notices, uye ichiri pa Android 10 pasina kutaurwa nezvekuvandudzwa ku Android 11. Kana iwe uchikwana neaya ma trade-offs, iyo Realme X7 ine zvakawanda kupa.
Chinonyanya kukosha: Kana iwe uri kutsvaga kutenga foni ye ₹ 20,000, iyo Realme X7 ndiyo yangu yekukurudzira. Foni ine 90Hz AMOLED pani, iyo Dimension 800U ine simba rese raunoda, iyo kamera yeMPMP inotora mifananidzo yakanaka, uye iwe unowana ese-ezuva-bhatiri hupenyu ne64W inokurumidza kuchaja.